ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၀ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကူမင်းမြို့တွင် ကျင်းပနေသည့် အာဆီယံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် ဖိုရမ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။ ၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်သူများ ဖိုရမ်ကို ဇူလိုင် ၁၈ ရက်မှ ၂၁.
မောင်းပြန်သေနတ်များနှင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိမှုအား ဆက်လက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေ
မောင်းပြန်သေနတ်အလက် ၂၀ ကျော်နှင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအမြောက်အများအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကွင်းဆက်တရားခံများနှင့် ဆက်စပ်တရားခံများအား ဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေသည်ဟု အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံ သတင်းထောက်သုံးဦးကိစ္စတွင် ပေါ်ပေါက်နေသော မေးခွန်း ၅ ခု
ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့ တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA) လှုပ်ရှားရာ နယ်မြေအတွင်း သတင်းယူပြီး ပြန်လာတဲ့ သတင်းထောက်သုံးဦးအပါအဝင် လူ ၇ ဦးကို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး ပြီး မတရားအသင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇(၁)နဲ့ ဖမ်းဆီးထားတာ တစ်လနီးပါးရှိလာပါပြီ။ DVB သတင်းအေဂျင်စီက အကြီးတန်း.
အငြင်းပွားနေသော တိုးရစ်ဘားမား အဆောက်အအုံ
ဆူးလေဘုရားကို အပေါ်မှစီး၍ မြင်နိုင်သော သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ စီမံချက်မှာ ယင်းမြေသည် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည်ရယူလိုကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်လျက်ရှိသည်။
ကွန်ယက်နာဂ ဘုရင်ကြီး အုပ်စိုးသောနယ်မြေမှာ မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံမှ ကျေးရွာ ၄၀ ကျော် ပါဝင်ပြီး နယ်စပ်မျဉ်းသည် ရိုးရာမီးလင်းဖိုဘေးမှ အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြားပေးရာ သူ့နေအိမ် အလယ်တည့်တည့်မှ ဖြတ်သွားသည်။
Raymond Pagnucco ရေးသားသည်။
လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ ရာသီဥတုကြောင့်ဟု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လက လူပေါင်း ၁၂၀ ကျော်နှင့်အတူ တပ်မတော်လေယာဉ် ပျက်ကျသွားမှုမှာ ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
နံပါတ်အလှလေလံပွဲမှ အမြတ်ငွေသိန်း ၃၇၀ ကျော်ကို သုခရိပ်မြုံဂေဟာသို့ တယ်လီနော လှူဒါန်း
တယ်လီနောအနေဖြင့် နံပါတ်အလှလေလံပွဲများအား ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် တောင်ကြီးတို့တွင် လေးကြိမ်ကျင်းပခဲ့ရာ စုစုပေါင်း အကျိုးအမြတ် ကျပ် ၅၆၂ သန်းရရှိခဲ့သည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အား နျူကလီးယားကင်းမဲ့ဇုန် ဖြစ်စေလိုဟု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အား နျူကလီးယားကင်းမဲ့ဇုံဖြစ်စေလိုသည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မြောက်ကိုရီးယား မူဝါဒရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား ပြောကြားလိုက်သည်။